Inja Ukuzala Ulwazi: Ngabe abelusi baseGolden bayizinja ezinhle? - Izinhlobo
Inja Ukuzala Ulwazi: Ngabe abelusi baseGolden bayizinja ezinhle?
Izinja yizilwane ezehlukile ezivikeleke ngokuqinile endaweni ezimpilweni zethu. Ezinye izinja zihle ngokweqiniso, futhi enye yazo yi-Golden Shepherd.
Isiphambano esiphakathi kweGolden Retriever noMalusi waseJalimane, izinja ezimbili ezithandwa kakhulu e-US, i-hybrid yazo enhle isilwane esihle futhi esihamba naso.
Uma lokhu kuzwakala njenge-pup yakho, qhubeka ufunda ukuze wazi le fido kangcono.
Kungani uMalusi Wegolide wadalwa?
Ubukeka kanjani uGolden Shepherd?
Ubuntu obuthandekayo bamaGolden Shepherd
Ukunakekela uMalusi wakho weGolide
Ngabe abelusi begolide baphile saka?
Malini umdlwane weGolden Shepherd?
Ukuzala kuqhathaniswa neGolden Shepherd
Isinqumo: Abelusi Bamagolide bangabangane abahloniphekile
Inhloso yabafuyi kwakungukuthi dala uhlobo oluxubekile olunezinkinga zempilo eziphansi kuqhathaniswa nabazali bayo abahlanzekile futhi babe yi umlindi wokugcina nesilwane somndeni .
Akwaziwa ukuthi umhlanganisi waseGerman Shepherd Golden Retriever ubenesikhathi esingakanani ekhona, kodwa abanye bathi kungenzeka ukuthi bebeyingxenye yomhlaba we-canine kusukela ngawo-1980 - lapho kwaqalwa ama-purebreds. Baqale ukunakwa ngo-2009.
Noma ngabe iGolden Shepherds ingaziwa yiAmerican Kennel Club ngoba iyinja yomklami, ezinye izinhlangano ziyayamukela futhi zamukele le pooch yokubhaliswa. Kukhona i-Designer Breed Registry (i-DRA), I-American Canine Hybrid Club (ACHC), kanye I-International Designer Canine Registry (IDCR).
Masihlangane nabazali bale doggo ukuqonda kangcono ukuthi bazophuma kanjani maqondana nokubukeka nobuntu.
UMelusi waseJalimane onesibindi
Eyaziwa njenge Uhlobo lwesibili oludume kakhulu e-US futhi Inja esemthethweni yaseJalimane , Abelusi BaseJalimane (I-GSD) iyathandwa ngesimo sabo sokusebenza kanzima, isimilo sabo esibukhali, nobuhlakani.
Ekuqaleni zazisetshenziselwa ukwalusa eJalimane, futhi abanikazi babona ukuthi lezi zimiso zokusebenza kwezinja zibalulekile. Namuhla, abadumile kuphela emapulazini nasemapulazini, kodwa bafakwa njengokhetho oluphezulu njengomlingani wamaphoyisa namasosha. Ukuba ne- amandla okuluma angama-238 PSI nakanjani iyasiza ngomsebenzi nokuthatha abantu ababi.
Ama-GSD yiwo ama-canine amakhulu ngobude obusukela kumasentimitha angama-22 kuye kwangama-26 (amasentimitha angama-56 kuye kwangama-66) nesisindo samakhilogremu angama-65 kuye kwangama-90 (29 kuye kuma-41 kg).
Futhi ngokusetshenziswa komzimba wabo osheshayo futhi onemisipha kahle, kungabathinta futhi bathokozele impilo yeminyaka engu-7 kuye kwengu-10.
Ukuthandwa kohlobo lwe-German Shepherd kungenzeka ukuthi lwaqhamuka ekupheleni kweminyaka yama-1800, kodwa lusaqhubeka nokufaka izinhliziyo eziningi zezinja ngenxa yezimpawu zazo ezichazayo. Akumangazi ukuthi zingenye yezinketho eziyintandokazi lapho kudalwa ama-crossbreeds, njengoGolden Shepherd, UHusky waseJalimane , nobuhle UCorman Shepherd .
IGolden Retriever enobungane
Ukulandela i-GSD uma kukhulunywa ngokuthandwa, ikakhulukazi ngemindeni, kuyathandeka IGolden Retriever elinengubo ekhazimulayo yegolide.
Le nja yesibhamu evela eScotland yazalelwa ukuthola umdlalo (yingakho igama) njengamadada, izinyoni zasemanzini, nezinyoni zemidlalo ezisenyakatho. Abanikazi balolu hlobo bangavuma ukuthi noma yimuphi umsebenzi ohlobene namanzi uyinto yokuchitha isizungu eyintandokazi yale doggo.
Ngayo ukudlala nokudlala indlela yokuphila, i-Goldens ibonakala ngathi okulingene ama-canines agcina ukusebenza kwawo njenge-puppy-ish, futhi ayakwenza. Kepha kulabo abangazi, le pooch enothando futhi ehlakaniphile.
Akukhona nje kuphela ukuthi laba ababuyisanayo bancintisana emicimbini yokulalela neyokuvumelanisa, kodwa futhi bathembekile uma kukhulunywa ngokuthola, ukuzingela, ukusesha nokuhlenga, kanye nosizo nezinja eziqondisayo.
IGoldens ngama-fidos ezemidlalo anesisindo esingamakhilogremu angama-55 kuye kwangama-75 (25 kuya ku-34 kg) futhi ame ngamasentimitha angama-21.5 kuye kwangama-24 (55 kuye ku-61 cm).
Uma kuqhathaniswa nabelusi baseJalimane, abakwaGolden Retrievers baphila isikhathi eside - cishe iminyaka eyi-10 kuye kwayi-12.
Kufanele wazi ukuthi kunzima ukubikezela ukuthi inzalo yezinhlobo ezimbili ezihlukene izobukeka kanjani, futhi kaningi kuyenzeka ukuthi ukubonakala kwayo njengomdlwane kuzoshintsha uma sezikhulile ngokuphelele, noma zinezimbungulu ezingenacala. Kepha singenza okujwayelekile kususelwa kuzici zomzimba zabazali babo.
Ukuhlanganiswa kweGerman Shepherd Golden Retriever kungahle kube nokwakha kwezemidlalo noma okuncikile, enekhanda elikhulu futhi elibanzi ikhanda. Izindlebe zazo ezinkulu zingama ziqonde noma zibe yifloppy, futhi amehlo azo anombala onsundu ojulile onombono ocacile noma ohlakaniphile. Lapho-ke umsila uzoba mude, uqine, futhi ugobe kancane.
Uma kukhulunywa ngaleli bhantshi lenja yomklami, ikakhulukazi anoboya obukhulu obukhulu obumaphakathi noma obude. Kodwa njengoba kunjalo kabili-camera izinja, singaqiniseka ukuthi azinconyelwa abagulayo bokungezwani komzimba.
Abanye bangaze babe nezimpaphe ngaphansi, emilenzeni nasemsileni. IGolden Shepherd ingabonakala ngemibala eyinhloko efana nomnyama, i-tan, ukhilimu, okuluhlaza okwesibhakabhaka nokubomvu, kepha futhi ingaxubana nalezi shades.
Usayizi: Ngabe iGolden Shepherd inkulu kangakanani?
Singalindela ukuthi le hybrid ibe yi- okulingene nenja enkulu enokuphakama okusuka ku- Amasentimitha angama-20 kuya kwangu-27 (51 kuya ku-69 cm) futhi uyakwazi ukukala Amakhilogremu angama-60 kuye kwangama-95 (27 kuya ku-43 kg). Ngokobulili, abesifazane bavame ukuba bancane kunabesilisa.
Uma uzibuza ukuthi umdlwane weGolden Shepherd ufinyelela nini usayizi wawo omdala, imvamisa lapho uneminyaka engaba ngu-2 kuye kwengu-2 ½ ubudala.
Elinye iqiniso elijabulisayo ngale nja yomklami ukuthi bona yenza kahle emafulethini ! Ngaphandle kobukhulu bayo, ingxube yeGolden Shepherd ingakwazi ukuzivumelanisa nanoma yiluphi uhlobo lwendlu, inqobo nje uma izidingo zabo zokuzivocavoca zifeziwe.
Ukuphendula umbuzo wethu wokuqala omayelana nalokhu kuxubana, abakwaGolden Shepherd bane ubuntu obuhle kakhulu . Njengabazali bayo, banothando futhi bahlakaniphile. Ziyi-canine ekhazimulayo engaqeqeshwa kalula futhi ingaba enye yezinja eziqaphe kakhulu nezinja zokubuka.
Hlala ukhumbula lokho inzalo ehlanganisiwe ingazuza noma yiziphi izimfanelo zabazali bazo . Kwesinye isikhathi, bangafana njengomzali oyedwa komunye. Kunoma ikuphi, le fido inezici eziningi ezinhle.
Bangakwazi nokuhamba kalula futhi bangahlala befuna ukujabulisa imindeni yabo ngobuhlakani babo, okwenza lokhu kudume ngokweqile nezingane.
Qaphela, noma kunjalo. Noma ngabe bezwana nezingane zakho, le pooch inkulu impela, futhi uma ithola amandla okulunywa yi-German Shepherd, kufanele uqaphele. Kungcono uphephe kunokuzisola.
Akusho ukuthi isikhathi sokudlala asikwazi ukuba mnandi. Kuyindlela enhle kakhulu yokubopha izilwane zethu ezifuywayo. Akunandaba ukuthi yimuphi umsebenzi, iGolden Shepherd ingafuna ukuba yingxenye yawo. Ngeke baze bakwazise uma ubashiya bodwa isikhathi eside ngoba bona angathola ukukhathazeka ngokwehlukana .
Ukushisa amandla abo kuzosiza futhi ukuvimbela noma yiziphi izinkinga zokuziphatha.
Unazo ezinye izilwane ezifuywayo ekhaya? Izinyoni, i-hamster ekhubazekile, noma ikati? Qaphela uma uhlose ukuthola ukuhlanganiswa kwakho kweGolden Retriever & German Shepherd. Kufanele sikunake lokho banabazali abanemvelaphi yokuzingela . Uma kungenjalo, kungadingeka ubhekane nokujaha okuningi.
Uma ufuna lolu hlobo njengomngane we-canine, gxila ekuhlalisaneni nasekuqeqeshweni kwasekuqaleni ukuze bazokwazi ukusabela kahle lapho kunabanye abantu nezilwane ezifuywayo eziseduze.
Bheka nje le vidiyo yomdlwane omuhle futhi odlalayo weGolden Shepherd:
Uma ngabe uke waba ne-Golden Retriever noma i-German Shepherd, ukuhlanganisa lezi ezimbili kungadala i-hybrid engeyona i-hypoallergenic. Ngakho-ke lungela isikhathi sokuchitha! Kufanele uxubha izinwele ze-doggo yakho nsuku zonke futhi ulungiselele i-vacuum yakho.
Kepha lapho ukuxuba kweGolden Shepherd kungashayi ijazi layo ngokweqile, ungalungisa noma uxubhe ijazi layo kabili kuya kathathu ngesonto .
Kufanele futhi ukhumbule ukuthi izinhlobo ezimbili zezinja ezifakwe umbala ophindwe kabili akufanele kugundwe . Uboya babo benzelwe ukuvikela ama-fidos esimweni sezulu esibi kakhulu njengeqhwa, imvula, nokubhukuda emanzini abandayo. Iphinde imelane nokungcola. Lokho kusho ukuthi kufanele unikeze i-pooch yakho kuphela ukugeza lapho kudingeka .
Buka le vidiyo yesicoci sendlela yokulungisa izinja ezifakwe umbala ophindwe kabili:
Ngaphandle kwalokho, yenza isheke lamasonto onke lezindlebe zakho zomxube weGolden Retriever German Shepherd udilize izinzipho zakhe kanye noma kabili ngenyanga.
Futhi njengoba lolu hlobo oluxubekile luthanda ukwanda kwe-tartar, kwenze umkhuba ukuxubha amazinyo nsuku zonke.
Ngokudla kwayo, khumbula umthetho wokuthi uhlobo nenani lokudla esikondla inja yethu kufanele kube yikho ngokuya ngeminyaka yakhe, ubukhulu, izinga lomsebenzi noma imetabolism, kanye nempilo . Ngakho-ke ngale canine, khetha ama-kibbles omile enzelwe izinhlobo ezisebenza kakhulu nezinkulu.
Le nja yomklami nayo ithambekele ekutholeni isisindo, ngakho-ke qiniseka ukuhlukanisa izinkomishi ezimbili nohhafu kokudla kwenja ekudleni okubili. Futhi ungashiyi ukudla ngaphandle noma wondle isilwane sakho mahhala. Namathela esimisweni sokudla esijwayelekile futhi uqiniseke ukuthi unciphisa ukuphatha.
Ukubhekana ne-quirk yayo yomlomo, guqula kusuka kokudla okulula kube ngamathambo aqinile futhi uhlafune amathoyizi. Izogcina umngani wakho woboya ekuhlafuneni izicathulo zakho eziyintandokazi nefenisha ebizayo.
Ake siqhubeke nokuzivocavoca umzimba! Ukufuna le ndlela ehamba phambili kusho ukuthi udinga ukusebenzisa imali okungenani ihora nsuku zonke ukuqinisekisa ukuthi uthola ukukhuthazeka ngokomzimba nangokwengqondo akudingayo. Kwenze kujabulise ngokuthatha i-Golden Shepherd yakho emisebenzini emisha efana nokuhamba izintaba.
Ungajabuli kakhulu, noma kunjalo. Uma uthola i-German Shepherd Golden Retriever mix puppy, gcina isikhathi sokudlala, njengokugijima noma ukulanda, otshanini. Amajoyinti abo awakheki ngokugcwele aze afinyelele eminyakeni emibili ubudala. Ngakho-ke zama ukuziqhelelanisa nezindawo eziqinile, njengendawo egandayiwe ukuze ugweme izinkinga zempilo zakuqala.
IGolden Shepherd imvamisa iphilile, kepha ingazuza njengezifo noma ithuthukise okunye ukukhathazeka kwezempilo endleleni.
Ezinye zezifo okufanele uziqaphele yi-hip ne-elbow dysplasia, i-atopic dermatitis, ne-hyperthyroidism.
Uma ucabanga ukuthi lokho kubi, bangaba nomdlavuza, isithuthwane, Ukungasebenzi kahle kwe-Exocrine Pancreatic (EPI), Isifo sikaVon Willebrand, i-aortic stenosis, i-osteoarthritis, ne-myelopathy ewohlokayo.
Ungase uzibuze ukuthi lokhu kungaba kanjani lapho ama-crossbreeds enamandla amakhulu we-hybrid? Abanye abantu bayavuma lokho amamiksi aphilile kunama-purebreds , kodwa lokho akusho ukuthi akufanele siqaphele.
Kusukela enqubeni yokuzalanisa kuze kufike ezingeni lapho sinakekela umdlwane, konke kungathinta impilo yaleyo nja.
Kusafanele sithathe izinyathelo zokuzivikela, sinakekele kahle izilwane ezifuywayo, sinikeze ukudla okufanele, futhi sihlolwe njalo ngezilwane, okungenza umehluko. Yenza lokhu, futhi isiphambano sakho seGolden Retriever & German Shepherd singaba nempilo ye- Iminyaka engu-10 kuya kwengu-14 .
Imidlwane yeGolden Shepherd ibiza noma yikuphi kusuka $ 500 kuya ku- $ 1500 . Intengo yomdlwane ithinteka ngezinto ezahlukahlukene. Ezinye zalezo indawo yomfuyi, uzalo lwegazi lwabazali, ukuthandwa kwekennel, nosayizi kadoti.
Ngokuvamile, ukweqa uMalusi waseJalimane ngeGolden Retriever kungaveza udoti we 6 kuya ku-10 imidlwane . Ngakho-ke uma umfuyi othile enabathengi abaningi futhi kukhona izinyane elilodwa kuphela noma amabili atholakalayo, lungisa isikhwama sakho semali ukuze uthole i-furball yakho eyi-hybrid khona manjalo.
Kepha ngaphambi kokukhokhela noma yimuphi umdlwane, qiniseka ukuthi ubhekene nomfuyi onomthwalo wemfanelo.
Bheka abazalanisi ababeka phambili inhlalakahle yesitoko sayo sokuzala kanye namazinyane aso. Babezoxoxisana nawo wonke umthengi onentshisekelo ukuze aqiniseke ukuthi ama-furballs amancane azophela kumnikazi ofanele. Yilungele ukuphendula leyo mibuzo, futhi wazi ukuthi ubuze ini , kanjalo.
Ukwenza ucwaningo lwakho kuyintengo encane okufanele uyikhokhe ukuze uthole owakho uGolden Shepherd onempilo.
Ukuze uqiniseke ukuthi uthola umdlwane onempilo, ungakhohlwa ukubuza ukuthi ungawabona yini amarekhodi ezokwelapha ezinhlobo zabazali. Uma udoti ugonyiwe, cela ukuthi nawe ungakubheka lokho.
Ungabheka futhi abanye abanikazi beGolden Shepherd noma a iqembu lezokuxhumana ukuqonda ukuzibophezela okudingeka ukwenze ukuze unikeze le nja yomklami impilo engcono kakhulu.
Abalimi be-Golden Shepherd nama-kennels
Uma usukulungele ukubheka imidlwane ethile yeGolden Shepherd edayiswa ku-inthanethi, sithole amanye amawebhusayithi anezinja ezikhona kuwe!
Igolide Umalusi Pup (E-Central Virginia)
Ama-Alzimm Kennels (EOhio)
Kukhona nezindawo zemakethe okufanele uzihlole, njenge Imidlwane yaseGreenfield , Imidlwane yaseLancaster , futhi Imidlwane eyisihluthulelo .
Kuthiwani ngoMalusi Osagolide wokutholwa?
Ukucabanga okuhle! Ubuwazi ukuthi izinhlobo eziningi zokuxubana ziphelela ezindaweni zokukhosela? Kungaba nezizathu eziningi ngemuva kwayo, kepha esinye sazo kungenxa yokuthi abanikazi babo bangaphambilini bebengakulungele ukuthi amaphuphu amahle akhule kanjani - ukuchitheka okuningi, kukhulu kunalokho obekulindelekile, nezinye eziningi.
Yingakho sikukhuthaza ukuthi usebenzise, ​​usindise, noma ukhulise iGolden Shepherd, noma enye inja. Ngamunye wabo ufanelwe ukuthandwa nokuba nomndeni, futhi bebefuna kuphela ukuthanda umuntu wabo.
Izinhlangano eziningi zeGolden Retriever kanye namaGerman Shepherd noma amaqembu nawo anezinhlobo ezixubekile ezidinga ikhaya laphakade. Abagcini nje ngokuba nama-purebreds kanye ne-Golden Shepherds, kukhona nezinye izingxube ezingantshontsha inhliziyo yakho!
Ukutakulwa Komalusi WaseJalimane Nokutholwa (URaleigh, NC)
ISedona Shepherd Sanctuary (IMillburn, NJ)
Ukutakulwa Kokushesha Kwegolide (Oklahoma City, KULUNGILE)
Ukutakulwa KweDelaware Valley Golden Retriever (Reinholds, PA)
Izilwane ezifuywayo ezindlini zokukhosela ziza ngayo yonke iminyaka nobukhulu. Uma ungafuni injanyana ngoba, kuyavunywa, iwumsebenzi omningi futhi idinga isikhathi esiningi njengoba yenza ukubekezela, bese ukwamukela injana endala, noma i-canine ephezulu, kuyisinqumo esihle. Ngemuva kwakho konke, iningi labo selivele lifundisiwe ezindlini.
Kukhona okunye ukuhlanganiswa ngaphandle lapho okungaba inketho enhle kakhulu uma kwenzeka uzwa ukuthi iGolden Shepherd ayilona uhlobo olufanele wena.
Nazi ezinye izinja zabaklami okufanele uzicabangele ukuthi ngabe uGolden Shepherd ukwazile yini ukuthola intshisekelo yakho.
IGolden Australian Shepherd
I-Golden Aussie ( umthombo )
Eyaziwa nangokuthi i- I-Aussie Retriever , le hybrid iyisiphambano phakathi kwe- Umalusi wase-Australia neGolden Retriever.
I-Aussie Golden Retrievers unekhanda elibanzi, izindlebe ezilengayo, amehlo azwakalayo, nekhala elimnyama. Le nja enesisindo esiphakathi nendawo enkulu ingaba nesisindo Amakhilogremu angama-30 kuye kwangama-60 (14 to 27 kg) futhi unokuphakama kwe- Amasentimitha angu-19 kuya kwangu-23 (48 kuya ku-58 cm). Abanye bathi bangafika ekuphakameni ngamasentimitha angama-76.
Futhi aziwona ama-hypoallergenic futhi acatshangelwe ama-shedders alinganiselayo . Ungabathola ngokuhlanganiswa kwegolide, omnyama, omhlophe, noma onsundu. Eminye ingaba yizinhlobonhlobo zemibala ehlanganisiwe, enamabala, futhi enemibala. Lolu hlobo oluxubekile futhi lunengubo ephindwe kabili engangenwa manzi futhi emaholoholo.
Ungalindela ukuthi le fido iphumelele ezinhlotsheni ezahlukahlukene zemisebenzi, ikakhulukazi ekwaluseni! Bayakujabulela ukuchitha isikhathi nabanikazi babo nokwenza umsebenzi. Noma, kungaba yinkinga kulabo abanezinye izilwane ezifuywayo ngoba le nja yomklami ingabamba izinto zabo nabantu ababathandayo.
Ngaphandle kwalokho, abelusi baseGolden Australian bathembekile, banobungane, bakhulu ngezingane, futhi bangaphila iminyaka engafika kwengu-15.
I-GSD ehlanzekile nezinhlanganisela zayo, kanye nezinye izinja ezelusayo, kuvame ukuqhathaniswa nalokhu okuhehayo Inkosi uMelusi .
Ekhuliswe ekuqaleni kweminyaka yama-90s evela kubelusi baseYurophu nabaseMelika baseJalimane, i-Alaskan Malamutes, neGreat Pyrenees, lesi sidlakela sakhiwa abaseMelika ababizwa ngoDavid Turkheimer noShelley Watts-Cross.
Babefuna ukudala i-King Shepherd enezinwele ezinde, kepha ukuzalanisa kunikeze le nja yomklami ukwanda kokwehluka kofuzo noma izifo ezimbalwa zofuzo.
IKing Shepherds ingahlanganyela izici ezimbalwa zomzimba nobuntu nama-GSD, kepha kunjalo emangelengele kakhulu, enemisipha enamandla, futhi enamandla ngokwengeziwe . Eqinisweni, yibo abakhulu kunabo bonke esigabeni sabelusi. Banokuphakama kwe- Amasentimitha angama-27 kuya kwangu-29 (Amasentimitha angama-69 kuye kwangama-74) nesisindo Amakhilogremu angama-90 kuye kwayi-150 (41 kuya ku-68 kg).
Ngalezo zilinganiso, ungacabangi ngisho nokuletha le pooch enkulu e-condo, efulethini, noma kunoma yiliphi ikhaya elincane. Badinga indawo eningi, ngakho-ke indlu enegceke elikhulu ngemuva, ipulazi, noma ipulazi, ingafaneleka kakhulu.
Ngejazi labo, banezinhlobo ezimbili - eziqondile futhi ezimangele, bese kuba nezama-wavy nezinwele ezinde.
IKing Shepherd ingeza ngemibala emnyama nemhlophe futhi ngisho nesikhumba esinezimpawu ezithile zokumaka okumnyama nokunsundu. Abanye bangaba noboya besiliva obumpunga ngamacebo amnyama.
Mayelana nokuziphatha, bahlakaniphe kakhulu, bathembekile, basebenza kanzima, futhi banothando. Ngaphandle kobukhulu nobuntu babo obujabulisayo, kunjalo ubumnene obuyisimangaliso nezingane . Ngakho-ke sebenzisa ngokugcwele isikhathi sabo sokuphila seminyaka eyi-11 kakhulu uma unquma ukutholela inkosi isilwane.
Iziphambano zeGolden Retriever nezaseGerman Shepherd zingathathwa njengama-canines afanele kubo bonke abanikazi bama-novice nabanolwazi. Ukuhlangana kokubukeka kwabo okumangazayo, ubuhlakani, ukuzinikela, nokuziphatha okuhle kubenza babe uhlobo olukhanga kakhulu .
Kungaba nokuningi kwe izici okufanele zicatshangelwe , njengenja enkulu, i inani lokudla elingakudla nsuku zonke , namandla ayo aphezulu.
Isikhathi okufanele usichithe nomngane wakho onoboya kungenye into ebaluleke kakhulu, njengokuthola umuntu ozomnakekela lapho ungekho.
Uma ungumnikazi onolwazi ofuna i-pooch enkulu okungukuthi uhlakaniphile kakhulu futhi uthanda ukugijima noma ukuthatha uhambo olude, uGolden Shepherd uzokujabulela lokho! Uma ukhetha izinja ezincane, ezinakekelwa kancane ezingakujabulela ukulala kusofa isikhathi esiningi sosuku, ungahle uthande ukucubungula enye inketho, njengokuxubana okuncane kwePoodle njenge I-Yorkie Poo .
Futhi ungakhohlwa, uma uxabana nezinja, lolu hlobo lunoboya obuningi futhi ukhipha unyaka wonke . Ukuhumusha: ungaqala ukuthimula ubuka nje isithombe salesi sidlwane.
I-Temperament-wise, noma yimuphi umthandi wezinja ngeke athole lutho lokukhononda ngale hybrid. Kubuye kube ngusayizi ophelele wokuba ngumngani we-cuddle.
Singathanda ukuzwa izinganekwane zakho (okuhloswe nge-pun), imicabango, kanye nokuhlangenwe nakho kwakho maqondana neGolden Shepherd. Yabelana ngalo nabazali abakanye nabo be-paw nathi ngokuphawula ngezansi!
Uke wahlangana nenja ye-Golden Dox eluhlaza futhi enhle?
chocolate lab kanye rottweiler mix imidlwane
kukhulu kangakanani ukuqalekiswa kwentaba
Intengo kamalusi omncane wase-Australia
Kuzoba nkulu kangakanani ukuxubana kwelebhu yesibhakela
i-bulldog yaseFrance ngentengo yokuthengisa